2021 Amaala nke Grenada
Naanị agbakwunye na ụgbọ ibu
Gaa n'ihu ịzụ ahịa
Mechie igbe ọchụchọ
Citizlọ ahịa ụmụ amaala
Nwa amaala ala na ụlọ
Nwa amaala Montenegrin
Nwa amaala Turkey
Onye na-ere ere
Ensbụ obodo site na itinye ego
Error Uru dị na kọlụm "ọnụọgụ" enweghị ike ịbụ ihe na-erughị 1
Обакить в корзину
Na-agbakwunye ihe na ụgbọ ibu
N'ọtụtụ ebe a maara dị ka "Spice Island", Grenada na-ewetara gị ọmarịcha ọmarịcha, na-emetụta embankments, ugwu na ugwu. Ihe ndị a mara mma bụ akụkụ nke ọtụtụ ebe eji adọrọ adọrọ, enwere ohere buru ibu ịghara iguzogide ileta agwaetiti atọ kachasị mma. N'ime uru na ebumnuche ndị na-adọta ndị na-etinye ego na Grenada, enwere egwuregwu mmiri n'okpuru, ụgbọ mmiri, ụlọ oriri na ọ chụ ,ụ mara mma, na ahịrị ndị dị egwu.
Ihe pụrụ iche na uru:
ndebanye aha ozugbo, ọ bụghị ihe karịrị ọnwa anọ;
nsonye nke ụmụaka n'okpuru afọ 25;
nsonye nke ndị nne na nna karịrị afọ 65;
enweghị ihe ọ bụla chọrọ maka obibi;
ọ dịghị mkpa maka ọnụnọ onwe gị na Grenada iji nyefee ngwa;
ọ dịghị mkpa maka ajụjụ ọnụ, agụmakwụkwọ, ahụmịhe njikwa;
enweghị visa mgbe ị na-abanye n'ókèala nke ihe karịrị mba 140, gụnyere mpaghara Schengen;
dabere na nkwekọrịta nke Grenada bịanyere aka na United States, ụmụ amaala nke Grenada na-enye ohere iji rụọ ọrụ ọrụ, gụnyere azụmahịa, yana ibi na United States;
ịkwụsị ụtụ isi zuru ụwa ọnụ;
ọ dịghị ihe achọrọ iji gafere ule nyocha asụsụ;
ndebanye aha paspọtụ gọọmentị nke Grenada n'ime ọnwa 4.
Otu esi enweta ụmụ amaala nke Grenada:
1. Ala na ụlọ
Site na itinye ego na akụrụngwa akwadoro.
Ọnụ ego nke ego ahụ ga-abụ ma ọ dịkarịa ala $ 350 puku, ego ahụ ga-enwerịrị onye na-arịọ arịrịọ maka opekata mpe afọ 4. Maka onye ọ bụla na-elekọta onye na-achọ ọrụ, ego nke mgbakwunye ọzọ bụ $ 25 puku.
2. Ntinye ego anaghị eweghachi
US $ 150 - maka onye isi chọrọ;
US $ 200 - maka onye anamachọihe + ndị 000 na-elekọta
Mmefu maka nkwenye nke itinye aka na mpụ
US $ 5 - maka onye anamachọ ihe, ndị dabere karịa afọ 000
US $ 2 - agedmụaka ndị dị afọ 000 ruo 12
US $ 3 - maka onye anamachọ ihe, ndị dabere karịa afọ 000;
US $ 2 - Childrenmụaka ndị na-erubeghị afọ 000.
Ensmụ amaala nke Grenada RUS
Mụ amaala nke Grenada ENG
Share Kwuo na Facebook
Tweet Biputere na Twitter
Mepụta ntụtụ Chekwa na Pinterest
Laghachi ka ụmụ amaala site na itinye ego
AAAA Onye Ndụmọdụ LLC
Address: Arthur Evelyn Building Charlestown, Nevis, Saint Kitts na Nevis Ekwentị: + 44 20 3807 9690 E-mail: info@vnz.bz
Address: Estonia, Tallinn, Pae 21, ụlọ ọrụ 25 Ekwentị: + 372 712 0808
East, Federation Tower, Presnenskaya emb., 12, ala 19, Moscow, 123100 Ekwentị: +7 495 991 70 20, +7 495 991 99 20, +7 910 000 70 20 email: info@vnz.su
Address: Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenia Ekwentị: + 386 64 233 000, + 386 64 177 151, + 386 31 728 023
Address: Singapore, 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One # 12-07 Ekwentị: + 6531593955
Address: China, Hong Kong, 15 / F Millennium City 5, 418 Kwun Tong Road Ekwentị: + 852 81703676
Ozi na ego:
Bụ ụmụ amaala nke Saint Kitts na Nevis
Mụ amaala nke Saint Lucia
Ndị anyị na kọntaktị
Usoro nkwekọrịta data
Nsụgharị asụsụ anyị
Ensbụ ụmụ amaala obodo China
2021, ªº Na ikpo okwu Shopify
Jiri aka ekpe / aka nri na-agagharị na ngosi mmịfe ma ọ bụ swipe ekpe / aka nri ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwaọrụ mkpanaaka
Inghọrọ ihe pụta ìhè na nsonaazụ zuru ezu.
Pịa oghere ohere wee igodo igodo iji gosipụta ihe ịchọrọ.